Orinasa mpanamboatra stabiliser China Ca-Zn | JOYSUN
Ny stabilizer calcium-zinc dia novolavolain'ny teknolojia fitambarana manokana, ho singa lehibe. Izy io dia afaka manolo ny stabilizers misy poizina toy ny firaka, ny sira cadmium ary ny organotin, ny fampiharana dia nanaporofo fa amin'ny vokatra vita amin'ny resin PVC dia tsara ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fiovan'ny hafanana dia mitovy amin'ny stabilisitra sira,
toy ny ankamaroan'ny tontolo iainana namana stabilizers hafanana, dia manana fampisehoana dingana tena tsara. Milamina tsara sy fahaizan'ny toetr'andro. Ny tara-masoandro manohitra mafy, anti-sulfide
fandotoana. Fotsy fotsy voalohany. Hatsarao ny fananana ivelan'ny vokatra. Fifanarahana tsara & fanaparitahana amin'ny PVC. Fisorohana ny rotsakorana. Milamina amin'ny famolavolana endrika. Amboary ny hafainganam-pandeha extrusion, lava ny fotoana famokarana.
Ny tombony tena manan-danja indrindra ho an'ny stabilizer CA / ZN dia tsy misy poizina amin'ny stabilisatera pvc rehetra ary ny fananana ara-toekarena amin'ny fampiharana malefaka / semi-henjana.
Ny fisehoan'ny stabilisiteran'ny calcium sy ny zinc dia vovoka sy flake ary paty fotsy ihany. Ny stabilizer an'ny calcium-zinc vita vovoka dia ampiasaina ho toy ny stabilizer PVC tsy misy poizina be mpampiasa indrindra, izay matetika ampiasaina ao ambany:
Fonosana 1.Food, fitaovana fitsaboana
2.Wire sy tariby
3.PVC profiles, rindrina tontonana, fantsona, fittings ary vokatra vita amin'ny tsindrona hafa
4.Vola vita amin'ny fotsy fotsy
Tabilao misy 5.PVC WPC
Tc. Ny fitaovana dia be mpampiasa amin'ny karazana fantsom-panodinana profil pipa, indostrian'ny fanamboarana sambo, rafitry ny tambajotra, vy, injeniera an-dranomasina, fantsom-pitrandrahana solika ary indostria hafa.
Manaraka: fanolorana fanampiana fanampiana